I-KDE ilungiselela ukuphucula izinto ezininzi kwiPlasma 5.24 | Ubunlog
IPablinux | 16/10/2021 10:27 | KDE, Ubuntu
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, i Iprojekthi ye KDE waphosa IPlasma 5.23, abathi bayibiza ngokuba inguqulelo yeminyaka engama-25. Ngaphandle kwe-KDE neon, Kubuntu + Backports PPA kunye neRolling Release distro, uninzi alunalo uguqulelo lwendawo yemizobo ekhoyo, kodwa uNate Graham uqinisekisa ukuba sele sifuna ukusebenzisa iPlasma 5.24. Inkqubo ye- Inqaku lale veki ePointiesticks iqala ngokuthetha loo nto, kwaye kusenokwenzeka ukuba iyathetha ngenxa yotshintsho oluninzi lobuhle oluza kubakho. Yiyo kunye nokuphakamisa i "hype".
Kodwa ukongeza kolo phuculo, kwaye inokuba ngenye indlela, iprojekthi sele isebenza ekuphuculeni esele ikho, kwaye sele zilungisiwe imisebenzi eza kuvela kwisandla se KDE Plasma 5.23.1. Into emangazayo kukuba siqhubela phambili iibugs ezininzi kangangokuba ziya kulungiswa kuhlobo lwenqaku lokuqala, kuba i-5.23 ithatha iintsuku ezimbini kuphela phakathi kwethu kunye nenguqulo elandelayo eza kukhutshwa kwakhona ngolwesiBini, okanye yintoni enye, iintsuku ezintlanu zahlukene.
1 Amanqaku amatsha eza kungekudala kwi KDE
3 Ukuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi
4 Kuza nini konke oku kwi KDE?
Amanqaku amatsha eza kungekudala kwi KDE
ISkanlite ngoku ixhasa ukuskena kwiPDF, iphepha elinye kuphela ngoku (Alexander Stippich, Skanlite 21.12).
UGwenview ngoku ubonakalisa uqikelelo lobungakanani befayile entsha yomfanekiso xa iphakathi kokutshintsha (UAntonio Prcela, uGwenview 21.12).
ImiSebenzi kuMlawuli womsebenzi ngoku inemenyu yemenyu yentsingiselo "yiya kwimisebenzi" (uBenjamin Navarro, iPlasma 5.24).
Imenyu yeebhukumaki ze-Okular ngoku zilayisha ngokuchanekileyo kwaye isabonisa iseti echanekileyo yeebhukumaka xa uswitsha phakathi kwamaxwebhu avulekileyo (Albert Astals Cid, Okular 21.08.3).
Umboniso ngoku uthatha imibala echanekileyo yesikrini kwimiboniso kunye nenkxaso yemibala engama-10 kwisitishi ngasinye (iBernie Innocenti, iSpectacle 21.12).
Ujikeleziso lwesikrini oluzenzekelayo ngoku lusebenza ngelixa kusetyenziswa imo "yethebhulethi kuphela" (uJohn Clark, iPlasma 5.23.1).
Ukungena nge-'Enye ... 'kwiphepha lesikrini sokungena, apho igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha linokufakwa khona, lisebenza kwakhona (uNate Graham, iPlasma 5.23.1, kunye ne-distros kufuneka zibuyele kwangoko).
Iseshoni yePlasma Wayland ayisayi kuphazamiseka ngokukhawuleza emva kokungena ngemvume ukuba izicwangciso zebhodibhodi eziphambili "I-Right Alt ayikhethi inqanaba lesithathu" (Andrey Butirsky, Plasma 5.23.1) isetyenziswa.
I-KWin ayisaphazanyiswa ngokungacwangciswanga xa iphuma kwiFirefox (Vlad Zahorodnii, IPlasma 5.23.1).
I-daemon yangasemva ye-ked5 ayisayi kuphazamiseka ngokungacwangciswanga xa usebenzisa ubumbeko lwesikrini esineempawu ezininzi (iFabian Vogt, iPlasma 5.23.1).
Fumanisa ukuba akusekho ngozi xa ucofa iphepha elithi "Kufakwe" xa usebenzisa i-distro efana neGentoo engenazo izicelo ezifakwe kwi-distro kunye nokusebenzisa i-Discover ukufumana i-Flatpaks kunye ne-Snaps (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23.1).
Ukucofa ekunene kwifayile kwidesktop xa kukhethwe iifayile ezininzi akusekho ukukhetha kuzo zonke iifayile ezingakhange zicofwe ekunene (Nate Graham, Plasma 5.23.1).
I-OpenConnect VPNs ngoku zinokunxibelelana njengoko kulindelwe ukuba unendlela yokudlula ekhuselweyo ye-FSID kunye nesatifikethi somsebenzisi kodwa akukho sitshixo sabucala (Raphael Kubo da Costa, Plasma 5.23.1).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ezinye iiwindows zesicelo azisavulelwa kwesona sincinci sincinci kunokwenzeka okokuqala xa kusenziwa izicelo (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.23.1).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ukwandiswa kwezicelo ze-GNOME ngoku zihlaziya ngokupheleleyo umxholo wazo kuyo yonke iwindow, hayi uninzi lwayo (Vlad Zahorodnii, IPlasma 5.23.1).
Ukutshintsha imibono kwipaneli yesicelo ngoku kulungile kwaye kuyakhawuleza (UDavid Edmundson, iPlasma 5.23.1).
Izinto ze-UI kwi-applet yezaziso azisahambi ngamanye amaxesha xa kukho izaziso ezininzi ezivela kwizicelo ezahlukeneyo ezibonakalayo (UCarl Schwan, iPlasma 5.24).
Iimenyu azisenaso ulwandiso olongezelelekileyo kwimiphetho xa usebenzisa ubungakanani beqhezu lehlabathi (Tatsuyuki Ishi, IPlasma 5.24).
Ibha yokuhamba ngokuthe nkqo kwi-bar yewindows esecaleni ayisasoloko ibonakala xa umbono wangoku ungashukumi (iMeven Car, iPlasma 5.24).
Izilayida zomthamo kwi-applet yevolumu yeaudio zinemvelaphi kwakhona; Imibala emibini eyahlukeneyo isetyenziselwa ukwahlula ubuninzi bevolumu kwinqanaba leevidiyo edlalwayo okanye erekhodiweyo (iTanbir Jishan, iPlasma 5.24).
Iseshoni yePlasma Wayland ayisasebenzi ngamanye amaxesha xa izithonjana zidluliswa kwaye zisuswe kuMphathi woMsebenzi phantsi kweemeko ezithile (iVlad Zahorodnii, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Ukwabelana ngefayile kwiTelegram xa ifakwe kwiFlatpak isebenza kwakhona (Alexander Kernozhitsky, Frameworks 5.88).
Kuyenzeka kwakhona ukuba utshintshe ii-icon zabaqalisi besicelo sephaneli (iFabio Bas, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Ubungakanani be-16px ye-im-user-offline icon ngoku ibonakalisiwe kumbala ochanekileyo (uNate Graham, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Umboniso awusacebisi ukufaka iVokoscreen okanye i-OBS ukuba sele ifakiwe (U-Anthony Wang, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
Kulungiswe iqela lemiba enxulumene windows ukubambeka kwimilo yesiporho emva kokutshintsha i-desktop ebonakalayo okanye ukunyamalala emva kokusebenzisa inqaku leDesktop yeVenkile (Vlad Zahorodnii, Qt 5.15.3 ngokudibanisa ingqokelela ye-KDE).
Ukukhawulezisa kukaDolphin ukuqala isicelo kwakhona emva kokutshintsha useto kwiplagi yolawulo lwenguqulo ngoku unikezela ngeqhosha eliya kwenza njalo xa ucofa (Umntu onombumbumbeko "Blaster goo", Dolphin 21.12).
Ukufumanisa akusasibonisi isixhobo esingafunekiyo xa ushukuma ngaphezulu kwesicelo okanye ubungakanani bepakethe yokubhaliweyo (uNate Graham, iPlasma 5.23).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ikhibhodi ebonakalayo ngoku ibonakala kuphela xa ijolise ngokucacileyo kulawulo lwe-UI olusekwe kwisicatshulwa ngomnwe okanye ngesikhombisi (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).
Iapps yenethiwekhi ngoku iyakwazi ukuhamba ngekhibhodi ngokupheleleyo, kubandakanya neenkcukacha ezinje ngokucinezela iqhosha elisezantsi ukuya kwinto yokuqala kuluhlu nokwenza iqhosha lesitshixo liye kwiqhosha elilandelayo loluhlu olujolise kuyo (Bharadwaj Raju, IPlasma 5.24) .
Ngokuhambelana nemigca efanayo, i-applet yebhodi eqhotyoshwayo ngoku iyakwazi ukuhamba ngekhibhodi ngokupheleleyo. (Bharadwaj Raju, IPlasma 5.24).
Ukufumanisa ngoku kuzama ukunceda abasebenzisi bezobuchwephesha abancinci ukuba bazi ukuba mabenze ntoni ngokulandelayo xa bekhangela isicelo abaziyo ukuba sikhona kodwa akukho nto ifunyenweyo (uNate Graham, iPlasma 5.24).
Ukufumanisa ngoku kubonisa ibha yezantsi yetab kwimowudi emxinwa / eshukumayo, kwaye izibambo zayo ezisecaleni azisagubungeli umxholo womxholo (Aleix Pol González, Plasma 5.24).
Izaziso zeefayile zevidiyo ngoku zibonisa isithonjana kwisaziso, njengeefayile zemifanekiso (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24).
Fumanisa ngoku itshintshela kumbono wekholamu ezimbini xa iwindow ibanzi kakhulu (Felipe Kinoshita, Plasma 5.24).
Intloko kunye nesihloko sokubhaliweyo kwizaziso ngoku sinokungafani okungcono kunye nokubonakala (uNate Graham, iPlasma 5.24).
Incoko yababini "yokongeza ubeko lwebhodi yezitshixo" ngoku ilula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa (iBharadwaj Raju, iPlasma 5.24).
Iindlela ezimfutshane ze KWin "Package Window X" ziye zathiywa igama kwathiwa "Hambisa i Window X" ukwenza injongo yazo icace (uNate Graham, Plasma 5.24).
I-applet yedijithali yewotshi ngoku inokhetho oluthi "Umhla uhlala ungaphantsi kwexesha" ukuxhasa "uMhla uhlala ecaleni kwexesha" kunye neenketho "Zenzekelayo" (iYuval Brik, iPlasma 5.24).
Izihloko zecandelo kwiKirigami FormLayouts ngoku zigxile ngokuphakathi kwaye zikhulu kancinci (uNate Graham, iiNkqubo-sikhokelo 5.88).
IPlasma 5.23.1 iza ngo-Okthobha 19. I-KDE Gear 21.08.3 iya kukhutshwa ngo-Novemba 11, kunye ne-KDE Gear 21.12 ngo-Disemba 9. Izakhelo ze-KDE 5.88 ziya kufumaneka nge-13 kaNovemba. IPlasma 5.24 iza kufika ngoFebruwari 8.
Ukonwabela konke oku ngokukhawuleza kufuneka songeze indawo yokugcina izinto Iindawo ezingasemva Ukusuka kwi KDE okanye usebenzise indlela yokusebenza enendawo zokugcina ezinjenge KDE neon okanye nakuphi na ukuhanjiswa okunemodeli yophuhliso yiRollling Release, nangona eyokugqibela ihlala ithatha ixesha elide kunenkqubo ye KDE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE ilungiselela ukuphucula izinto ezininzi kwiPlasma 5.24